Lionel Messi oo doonaya Neymar inuu ku laabto Barcelona | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Lionel Messi oo doonaya Neymar inuu ku laabto Barcelona
Lionel Messi oo doonaya Neymar inuu ku laabto Barcelona
Posted by: Mahad Mohamed December 27, 2018
Himilo FM – Barcelona ayaa “jeclaan laheyd” si ay dib ugula saxiixato weeraryahanka Paris Saint-Germain Neymar, sida laga soo xigtay Lionel Messi.
Neymar oo 26 jir ah ayaa dhaliyay 105 gool 186 kulan oo uu u saftay Barcelona intii u dhaxeysay 2013 illaa 2017 kahor inta uusan dhameystirin lacagta rikoorka adduunka ee uu ugu biiray PSG xaggaagii 2017.
Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa 44 gool dhaliyay 49 kulan oo uu u saftay PSG tan iyo markii uu yimid, lakiin waxa uu soo jeediyay in weeraryahanku uusan ku faraxsaneyn France.
Xaqiiqdii, Neymar ayaa la sheegay inuu ku riixayo inuu ku laabto Camp Nou isagoo ka qoomameeyay go’aanka ah inuu ka tago.
Messi ayaa doonaya in Barcelona ay dib ula saxiixato Neymar, lakiin waxa uu qiray inay aad u adag tahay.
“Waan arki doonaa sida adag, waxaan jeclaan lahaa inuu ku soo laabto “ayuu Messi u sheegay jariirada Marca.
“Waxaan nahay saaxiibbo, waxaan ku noolayn wakhtiyo aad u fiican laakiin waqti badan ayaan wada ciyaarnay, si kastaba ha ahaatee, waxaan u arkaa inay aad ugu adag tahay isaga, xitaa ka tagista Paris. PSG maaha inay u oggolaato Neymar in uu baxo. “
Ousmane Dembele – ayaa ah badalka Neymar oo ay kooxda la soo saxiixatay , wuxuu dhaliyay 14 gool 13 gool kalana caawiye ayuu ka ahaa 45 kulan oo uu u saftay kooxda heysata horyaalka Spain tan iyo markii uu ka soo wareegay Borussia Dortmund.
Previous: Hindiya: 65 jir dhashay cunuggeeda labaad
Next: Imaaraadka oo sharfay darawal aan wax khalad ah gelin muddo 49 sanno ah!
Lautaro Martinez oo isaga tegaya Inter Milan
Manchester United oo si bilaash ah ku dooneysa Jonny Evans
Ciyaartoyda Barcelona oo oggolaaday mushaar dhimis